Mustaqbalka Is-dhexgal Muuqaal 360 Degdeg ah | Martech Zone
Mustaqbalka Isdhexgalka Muuqaalka 360 Degdeg
Arbacada, Agoosto 24, 2011 Axad, Abriil 24, 2016 Douglas Karr
Tani waa farsamo qurux badan oo la yaab leh markaad bilowdo inaad ka fikirto fursadaha. Waxaa laga yaabaa inaad duubi karto sheekooyin badan oo sheekooyin ah oo aad isticmaasho adeegsadaha oo guji kan xiga. Laga dhigi karaa hal heck filim cabsi ah! 🙂
Dunida u arag si aan hore loo arag oo leh 360 ° video. Ma qiyaasi kartaa? Dadku waxay jecel yihiin inay eegaan 360 ° sawirrada waddooyinka ay ku nool yihiin, ama ay ogaadaan meesha ay ku sii jeedaan ee fasaxa ah. Sidee xiiso leh, hadday ahaan laheyd fiidiyow buuxa 360 ° halkii sawir wali laga heli lahaa? Muuqaalka 360 ° waxaad u abuuri kartaa khibrad khadka tooska ah macaamiishaada ah. La wadaag goobaha nolosha dhabta ah ee jawiyada ama dhacdooyinka.
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo mid ka mid ah magacyada domain ugu dheer Weligay waan helay, Yellowbird.
Tags: 360 darajo video ah360 video
Iftiiminta: Marketpath CMS iyo Ecommerce
Ha u oggolaan in Xogtu ay ku doqomiso - Waxay u shaqeysaa kor u qaadista fayraska